UX लेखन: लेखन र डिजाइन को लागी उत्पादनहरु को बारे मा पाठ डिजाइन - Print Peppermint
घर / डिजाइन ब्लग / मार्केटिङ, UX, लेखक / UX लेखन: लेखन र उत्पादनहरु को बारे मा पाठ डिजाइन को लागी नियम
सँधैy दिन, आवेदन र वेबसाइटहरु को संख्या बढ्छ। यसबाहेक, तिनीहरुको उपयोग को सादगी को कारण, अधिक मानिसहरु उनीहरु संग अधिक बारम्बार संलग्न। न केवल इन्टरफेस को डिजाइन सुविधा को स्तर लाई प्रभावित गर्दछ, तर उनीहरु भित्र पाठहरु। यी परिस्थितिहरुमा, UX- लेखन कर्षण प्राप्त गरीरहेको छ र उद्योग को विकास को एक महत्वपूर्ण तत्व बन्ने छ।
यूएक्स लेखकहरु पहिले नै फेसबुक, गुगल, माइक्रोसफ्ट, र अमेजन जस्ता ठूला टेक्नोलोजी कम्पनीहरु द्वारा कार्यरत छन्। वास्तवमा UX पाठहरु के हुन्, र उनीहरुलाई कसरी पाठकहरु लाई आकर्षित गर्न को लागी लेख्नु पर्छ?
एक UX लेखक वास्तव मा के गर्छ?
लेखकहरु लामो समय देखि पेशाहरु को एक विस्तृत श्रृंखला मा कार्यरत छन्। तिनीहरूले उपकरण र उपकरणहरु, लिखित निर्देशन र मार्गदर्शन को लागी सामग्री सिर्जना गरे, र उत्पादन बिक्री र पदोन्नति को लागी राम्रो लेखिएको पाठ प्रदान गरीयो।
नतिजा को रूप मा, कम्पनीहरु लाई अनुकूलन लेखन समीक्षा वेबसाइटहरु जस्तै मा जान बाध्य छन् लेखन न्यायाधीश त्यो उद्देश्य को लागी विशेषज्ञहरु खोज्न। हालैका वर्षहरुमा, यो प्रवृत्ति UX- लेखन, जो धेरै पेशाहरु को तत्वहरु को संयोजन द्वारा supplanted गरिएको छ। त्यसोभए, एक UX- लेखक को हो?
एक UX- लेखक को हो जो पाठ सिर्जना गर्दछ कि एक प्रयोगकर्ता एक वेबसाइट/अनुप्रयोग/कार्यक्रम ब्राउज गर्दा देख्दछ। यसमा समावेश छ:
बटन र कार्य को लागी कल को लागी आइकनहरु;
त्रुटिहरु को बारे मा चेतावनी;
प्रभावी UX लेखन को नियम
UX- पाठ को लक्ष्य प्रत्यक्ष, चेतावनी, वा लक्ष्य को लागी आफ्नो यात्रा मा प्रयोगकर्ता लाई प्रोत्साहित गर्न को लागी हो। UX पाठ दुवै डिजाइन र प्रयोगकर्ता अनुभव को एक महत्वपूर्ण घटक हो। नतिजाको रूपमा, यो हुनु पर्छ:
स्पष्ट - बुझ्न र पढ्न सजिलो;
छोटो - बेकार शब्दहरु बिना र तपाइँको क्षेत्र को सीमा भित्र;
उपयोगी - जानकारीमूलक र प्रयोगकर्ता को प्रश्नहरुको जवाफ मा उपयोगी;
आनुपातिक - इन्टरफेस भर मा लगातार शब्दावली र शैली को उपयोग।
UX लेखक को कर्तव्य यो सजिलो ग्राहकहरु लाई उत्पादन संग संलग्न गर्न को लागी बनाउन मा रहन्छ। UX पाठ मदत ग्राहकहरु तपाइँको ईन्टरफेस को सबै भन्दा बाहिर प्राप्त र उत्पादन को समर्थन।
धेरै शुरू बाट, UX लेखक डिजाइन प्रक्रिया मा संलग्न छ। उनी UX डिजाइनरहरु संग लक्षित दर्शकहरु को चाहना र चुनौतिहरु को पहिचान गर्न को लागी सहयोग गर्दछ।
उसले एक डिजाइनर जस्तै सोच्नु पर्छ र गतिशीलता र प्रयोगकर्ता इन्टरफेस को संरचना सार्थक र एकजुट माइक्रोकोपी उत्पादन गर्न को लागी ग्राहकहरु लाई अपील गर्दछ कि बुझ्नु पर्छ। यसलाई प्राप्त गर्न को लागी, उसले निम्न नियमहरु को पालन गर्नु पर्छ:
निर्माण प्रक्रिया मा प्रारम्भिक प्रामाणिक पाठ समावेश गर्नुहोस्
इन्टरफेस मा काम गर्दा, डिजाइनरहरु प्राय सर्वव्यापी पाठ को उपयोग। र यो शायद नै कहिल्यै प्रकाशित गरीएको छ किनकि यो एक मा छ नमूना.
मूल वाक्यांश यो फिट गर्न असमर्थ हुन सक्छ, र डिजाइन समायोजित वा पुरा तरिकाले पुनर्निर्माण गर्न को लागी आवश्यक पर्दछ। प्रयास बचाउन को लागी, यो धेरै शुरू बाट विकास प्रक्रिया मा UX लेखक संलग्न गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ।
पाठ संरचना प्रयोगकर्ता यो स्क्यान र अर्थ मा उठाउन मद्दत गर्दछ। यो हेडलाइन्स, उपशीर्षकहरु, र शरीर पाठ मा लागू हुन्छ, जो फरक फरक आकार को र एक स्क्रीन छवि संग युग्मित हुनु पर्छ यदि उपस्थित छ।
यसलाई सरल राख्नुहोस्
दिइएको छ कि UX- लेखक को प्राथमिक जिम्मेवारी आफ्नो ग्राहकलाई सल्लाह दिनु हो, उसको सिफारिशहरु को रूप मा सीधा को रूप मा व्यावहारिक हुनुपर्छ। UX- अनुकूल पाठ डिजाइन गर्दा निम्न दिशानिर्देशहरु संग रहनुहोस्:
छिटो पृष्ठ स्किमिंग को लागी अनुमति दिन एक पाठ पदानुक्रम बनाउनुहोस्;
त्यहाँ कुनै प्राविधिक शब्द वा पेशेवर शब्दजाल हुनुपर्दछ;
त्यहाँ कुनै सुपर लामो वा जटिल सर्तहरु हुनु पर्छ;
निष्क्रिय आवाज को उपयोग नगर्नुहोस्।
संख्या र अंक को उपयोग गरेर पाठकहरुको ध्यान पकड्नुहोस्
यदि पाठ मा एक संख्या देखिन्छ, यो एक संख्या को रूप मा सट्टा एक शब्द को रूप मा लिखित हुनुपर्छ। यो ध्यान कब्जा गर्दा अन्तरिक्ष को संरक्षण गर्दछ।
किनभने संख्या मस्तिष्क द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी को रूप मा मानिन्छ, पाठक पाठ मा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिन्छन्। तपाइँ उनीहरुलाई हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरुलाई अर्को क्षेत्र मा सार्न सक्नुहुन्छ, तर यसलाई अधिक नगर्नुहोस्।
महत्वपूर्ण शाब्दिक भावना बिन्दुहरु बोल्ड र अंकन संग चिह्नित गर्न सकिन्छ, जबकि आवश्यक जानकारी रंग मा जोड दिन सकिन्छ:
वर्तमानको कुरा गर्नुहोस्
लाई ग्यारेन्टी कि उपभोक्ता जानकारी प्राप्त गर्दछ, copywriters विज्ञापन र निर्देशात्मक सामग्री मा सही मितिहरु को उपयोग। किनभने प्रयोगकर्ता वर्तमान मा उत्पादन संग अन्तरक्रिया, UX भाषा वर्तमान संग सम्बन्धित शर्तहरु लाई समावेश गर्नुपर्छ। उदाहरण को लागी, "आज," "भोलि," र "हिजो।" संकेत मिति मात्र ग्राहकहरु को भ्रम को परिणाम हुनेछ।
तपाइँको पाठ तपाइँको ब्रान्ड को टोन र आवाज को एक प्रतिबिम्ब बनाउनुहोस्
तपाइँले लेख्नु भएको सबै सामग्री टोन र आवाज को लागी ब्रान्ड को लागी तपाइँ परियोजना को लागी बनाउनु पर्छ। तपाइँको ब्रान्ड को पहिचान के हो?
यो कसरी लाग्छ जब यो आफ्ना ग्राहकहरु संग बोल्छ? के यो सेवा वा उत्पादनहरु प्रदान गर्दछ?
तपाइँको ब्रान्ड को आवाज को टोन यो कसरी यो लक्षित दर्शकहरु संग सञ्चार छ। नतिजा को रूप मा, तपाइँ तपाइँको सामग्री भर मा उही शब्दावली र भाषाई ढाँचा रोजगार चाहिए।
रजिस्टर को ट्रयाक राख्नुहोस्
हेडर र अन्य वाक्यांश को एक समूह को लागी एक शैली को उपयोग गर्नुहोस्। त्यहाँ तीन विकल्प सम्भव छ मामला:
क्याप्स लक सबै पाठ को लागी प्रयोग गरिनु पर्छ;
एक ठूलो अक्षर संग प्रत्येक नयाँ शब्द सुरु गर्नुहोस्;
वाक्यांश को पहिलो अक्षर, मानिसहरु, शहरहरु, ब्रान्डहरु, आदि को नाम को लागी बाहेक सबै पाठ को लागी सानो अक्षरहरु को उपयोग गर्नुहोस्।
महत्त्वपूर्ण कुरा एक छान्नुहोस् र पूरै साइट पेज र अनुप्रयोग को सबै विन्डोज भर मा यसको साथ रहन को लागी हो।
प्रयोगकर्ता मैत्री पाठ बनाउनुहोस्
वेबसाइट मा वा आवेदन मा सामाग्री को ब्रान्ड के हो र यो के प्रस्ताव गर्दछ बुझ्न मा सम्भावित ग्राहक लाई सहयोग गर्दछ। तेसैले, यो UX- लेखक को लागी कसरी लेख्न को लागी मात्र विचार गर्न को लागी आवश्यक छ, तर के लेख्न को लागी र को लागी:
सल्लाह को एक टुक्रा;
पाठहरु उत्पादन को ठेगाना र उपभोक्ता लाई उसले पाउन सक्ने फाइदाहरु जान्न आग्रह गर्नु पर्छ।
व्याकरण लचीला हुनुहोस्
एक राम्रो लेखिएको काम पक्कै राम्रो व्याकरण हुनेछ। जे होस्, जब यो UX लेखन र अक्षरहरु को एक सीमित संख्या संग साना बटन को लागी पाठ उत्पादन गर्न को लागी आउँछ, यो व्याकरण लचीला हुन को लागी उत्तम छ, यानी, कठिन योगहरु लाई हटाउन र आवश्यक छैन कि घटक को संख्या घटाउनुहोस्।
स्लैlang्ग को प्रयोग बाट बच्नुहोस्
स्लैlang्ग कुनै पनी विशेष टेक्निकल वाक्यांश हो कि पाठकहरु लाई भ्रमित गर्न सकीन्छ तपाइँ तपाइँ निश्चित हुनुहुन्छ कि एक प्रयोगकर्ता बुझ्नुहुन्छ तपाइँ के भन्नुहुन्छ जब तपाइँ भन्नुहुन्छ भिडियो "बफरिंग?" यदि हो भने, त्यो पाठ को लागी एक उत्कृष्ट छनौट हो?
यदि होईन, तपाइँ एक अधिक आधारभूत शब्द को लागी हेर्नु पर्छ। अर्को उदाहरण शब्द "सक्षम" हो। यसको प्रयोग नगर्नुहोस् "चालू" लाई प्रतिस्थापन गर्न को लागी धेरै मानिसहरु यो एक पटक मा के मतलब छ अनुमान गर्न सक्दैनन्।
तपाइँ अब उच्च बनाउन को आधार मा एक दृढ पकड छ-गुणस्तर UX सामग्री। उनीहरुलाई मात्र केहि परिस्थितिहरुमा उपयोग गरिनु पर्दछ, एक विशिष्ट उपभोक्ता को लागी अनुसन्धान र विश्लेषण द्वारा निर्णय गरीएको छ। धेरै कारकहरु तपाइँको डिजाइन को समग्र शैली को प्रभाव, डिजाइन बाट समग्र ब्रान्ड रणनीति, जो ग्राहक संचार को शैली लाई प्रभावित गर्दछ।
https://blog.tubikstudio.com/user-experience-tips-ux-writing/ (तस्वीर १, २, ४,,,))
https://usabilitygeek.com/how-ux-writing-can-help-create-good-design/ (तस्वीर ३, ५)
Product उत्पादन फोटोग्राफी को लागी एक शुरुवात गाइड
२०२२ मा वेब विकास प्रचलन र प्रविधिहरू हावी गर्दै →